Mpempe akwụkwọ Concorde RW Reworked Version FSX & P3D - Rikoooo
downloads 61 589
Craftgbọ elu ụgbọ elu: Libardo Guzman Garcia. Native FSX/P3D ntụgharị site Rikoooo. Mpempe akwụkwọ mbụ site n'aka Philippe Marion. Ntughari nke Eduardo Rocha kwuru. Ada Adam Murphy
Emelitere na 27 / 07 / 2020: Idozi n'ihu ọdịda gia animation naanị atụgharị n'aka ekpe. Ofu ọnọdụ nke contrails nkuchi. Ugbu a, mmetụta anwụrụ ọkụ na-apụta na akpaghị aka site na 70% nke N1.
Emelitere na 20 / 07 / 2020: Dochie faịlụ a "Concorde.air" maka ụgbọ elu kwụsiri ike na nrụpụ njem ụgbọ elu ka mma.
Emelitere na 16 / 07 / 2020: Mmezi nke ogwe aka dị elu nke a na-ahụghị na kopopị mebere.
Ebube Concorde nwa amaala maka FSX / P3D ya na ihe ndi nile di egwu site na 1971 rue 2003. Oge erugo inyeghari ihe nlere anya nke ugbo elu nke ihe nlere nke ugbo elu gi. Ugbu a dị na nke mbụ na Freeware na Prepar3D v4 na v5 nwere ihe atụ 3D amaala. Ọzọkwa, maka FSX.
Na - etinye ihe ngosi 15 zuru oke nke ọma, ihe ngosi 3D nke nwere "maapụ" na - eche echiche, ihe odide abalị, mmetụta ndị na - adị ọkụ, ihe ngbasa ozi na ọkwa (Audio), FMC, Kpọọ (Audio), V-Speed ​​(Audio), Ogwe nke 2D, ụda dị adị nke injin "Olympus 593 turbojet", kokpiiti mepere emepe na ụlọ 3D na ọtụtụ ndị ọzọ. Nleta nke Libardo Guzman Garcia.
Ndepụta nke imeju
Orgbọelu Concorde Air France 1976-1989
Airport Concorde '79
Concorde Air France na 1975
Orgbọelu Concorde Air France-British Airways 1974
Mbido Concorde 1971
Orgbọelu Concorde Air France 1994-2003
Ọdụ ụgbọ elu Concorde Air France Pepsi 1996
Orgbọelu Concorde Air France-British Airways 1977
Onye edemede: craftgbọelu ụgbọ elu: Libardo Guzman Garcia. Native FSX/P3D ntụgharị site Rikoooo. Mpempe akwụkwọ mbụ site n'aka Philippe Marion. Ntughari nke Eduardo Rocha kwuru. Ada Adam Murphy
Robin R2160 Alfa & 160A maka FSX SP2